MUUQAAL: Ciidamada Somaliland iyo Puntland oo Hub Culus is dhaafsaday, Xiisad kale oo Tukaraq laga dareemay | KALSHAALE
MUUQAAL: Ciidamada Somaliland iyo Puntland oo Hub Culus is dhaafsaday, Xiisad kale oo Tukaraq laga dareemay
Jun 12, 2018 - 37 Aragtiyood
Tukaraq ( Kalshaale ) Xaalad deganaansho ah ayaa Maanta laga dareemayaa deegaanka tukaraq ee gobolka Sool halkaas oo xalay fiidkii ay madaafiic isku weeydaar sadeen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland.
Dadka tirada yar ee ku haray tukaraq ayaa Warbaahinta u sheegay in xalay labada dhinac ay isku weeydaar sadeen furumaha dagaalka,iyada Shacabka markii hore ay qabeen cabsi dagaal.
Weli lama sheegin khasaaraha labada dhinac ee ka dhashay madaafiicdii xalay,waxaana saakay tukaraq laga dareemayaa saan saantii ay reebeen.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA WARBIXIN
Labada Maamul ayaa deegaanka tukaraq iyo deegaanada kale ee Gobolka Sool waxa ay ku soo gurayaan ciidamo farabadan,waxaana sidoo kale ay Warbaahinta isku marsiinayaan hadalo keeni kara in dagaalka uu dib u qarxo.
Kalshaale waxan Meesha ka saara mid idoor ah baa soo diray. Walahay ma daawan Markuu dhahay Ciidanka isaaq iyo dowlada puntland .
Indhaha masiin karo dheh BM ka laydinku garacaayo.
Fariid, ka jeeso yaan wadnuhu ku istaagine!!
@war hooy isaaqow inamadan yaryar ee la so qalday meesha Kala baxa haddii nolosha ayay nici doonaan.wbt
War hooy shiidka iyo dhagax tuurka nagadayaa hadaydaan wax iska celinkarin daaroodoow.
Sida caruurta uun baad dhagaxaan nagusoo shiidaysaan markaasaad hadana yaacaysaan.
Gudida difaacaa Budhlayn baa yaabay!!
Iidoor lander munaafaqaddii harti iyo daarood ka dhex qaraabo ama kala shaxaad waa dhamaatay.
birta ayaa la iska aslayaa.
Iidooroow xaarka ceshta kkkkkkk
Libaaxyadii harti ee reer puntland iyo geesiyada daarood ayaa ku dul maraya wallee ee yaa kula taliya.
War ciyaalka iyo maryo calasta ku cesho hargeysa iyo ber bera.
Guul puntland guul khaatumo guul somali weyn
2 somali ugu faanka badnaa ayaa meesha isku haayo.
Qolo wexey leedahay ciida waxaan u dukaneynaa laascanood.
Qolo kale wexey leedahay tukaraq iguma filno ilaa yoocada halgankii ma dhamaan.
Ciidu waa jimcaha ma dheero.
2018 dagaal Isis wacasho waa tariikh cusub.
Waxaase ceebu ka dhici doontaa marka ciida lagaaro hadeey Reer pudland laascanood u dukan wayeen.
Waan waan ayaa socota Marka Puntland Waxay Dib Udhigtay Maalinta Ciida Iney Ku Tukadaan Laascanod Maadaama Waan waan aysocoto ayna ku andacoonayaan reer Puntland
Go’aankii ugu danbeeyay ay puntland qaadato wuxuu noqday 31/12/2018
INEY Gacanta Somaliland kabaxdo
Marmarsiyo Lama Waayo hayehee Ka xaaxaabiya puntland maalinta jimcaha ama maalinta ciida weyka noqodeen Iney laaska ku jalaa buteeyaan
Run sheeg waa dambi sheeg
Rasaastii iyo Taakuleyntii aan Xamar ka soo dhiibney wax ma tariweyday, Ceebta waan wada qabnaa -nin ridey iyo nin taakuleeyeyba.
Midbaa lahaa Ramadaanka ayaan u hakiney ee maanta Caynabo ayaan ku tukanlaheyn, Ok Ramadaanka waan idinka yeelney ee yaanaan maqlin waxaan u hakiney WORLD CUP owgiis.
-Waan waanta qaata nin Tukoraq ka tilaabsan waayey Taako Laaska ma tagikaro.
World Cup awgiis ku qoslay 😂😂😂
Si daacad ah baan u qoslay walahay sxb. Imtixaan ilaahay baad tahay ninyioow.
Allow kala qabooji, Somalidaas gaajo u baqtinaya nin aqli leh isdilkooda ku farximaayo.
Laakiin waxaan ogahay in xuduud Engriis iyo waan goosanayaa nina lagu qasbi doonin.
Qofka aqli waa ogyahay in maanta Somali qabiil ku kala adkaan karin.
Runta waxay tahay in Dhulbahante dhulkiisa cidna xoog ku joogi karin kuna xukumi karin.
Xitaa qabiilada ka yaryar sida Biyamaal ayaan tuuladooda cidna xoog ku joogi karin.
Somaliland SSC waxay joogi inta Dhulbahante u rabo inay joogaan.
Maalinta baxa yiraadaan, hadal kama dambaynayo.
Intaas ninka ogeyn waa dabaal.
Dabshid ceebta waad wada qabtaan kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk
Land of punt sxb tukoraq Wali anagaa joogna miyaydaan nasoo werayrayn dagaalkii gal gala ayaanu uxawilnay nagadaaya ciyaarta sxb
Kuwiina reer koofureedka ah oo dagaalka sugi la oo ka masayrsan 30 sano ayaan sida dugaaga iscunaynay oo ilaa maanta Cadaado iyo Dhuusamareeb la isku keeni la yahay, waa in Somaliland iyo Puntland nala mid noqdaan.
Tani way ka duwan tahay oo Dhuloos ayaa furaha guusha haya.
Maalinta midoobaan xitaa dagaal looma baahna, waa orod tuuladaada ku noqo.
Inay midoobaana waa dhowdahay lawadaa.
Taas yaan ogeyn?
Meesha ma taal sidii ciyaal la isku xuuxinayo iyo car aabahaa waranka ka bixi, wiilka faraha kala fujin waaya, waa fulay aabihiis waranka u daayey.
I Know the outcome of this war, already anoo xitaa wadanka joogin.
Boowe wax dhowra oo footballkina daawada oo yaan la ilaawin in sakada la dhiibo oo sifiican loo ciido.
Land of punt sxb balankii aan ku idhi ilagal miyaad kameraysatay dhulbahante hakumeraysane dowladii puntland miyaanay xoraynayn dhulkii kamaqnaa
Tukaraq baad ka hadlaysaa xitaa Laaska ma joogi doontid, waaba hadaad weli joogto, waa hubaa caawa nin Isaaq ah oo ciidan ah in hurdo ku gambayn dhul Dhulbahante oo mid Dhulbahante ah qori ku aghaysto xitaa hadday dirayska Somaliland wada sitaan.
Nin gadaal, dhinacyada iyo hore iska fiirinaya dhul ma difaaco.
Dagaalka inaad ku adkaato waa in atleast kan kaa dabyeeya kolsooni ku qabto.
Jawaabta bootada socota waan wada sugeynaa ee meel cidla ah haka dabaal degin.
Aniga dagaalka ma rabo laakiin waan ogahay meesha ku dhamaan!
Inaad degdegaysid waan arkaa laakiin Harti degdeg ma qabo oo in mid noqdaan la wadaa, welina laguma guulaysan, si fiican inkasta oo meel fiican marayso.👌
Maanta Khatumonews ku arkaayey kuwo reer Taleex ah oo leh” waa been in Puntland ku biirnay, anagu Somaliland baa nahay”
You see, dagaalka iska orod maaha, waxbaa lakala furdaaminyaa, adiga waxaad isleedahay haddii Puntland hadda xabadda bilowdo wuxuu noqon dagaal Harti isku jabaan.
Reerka aad sixirteen ayaa hubka ka dhigaynaa ee noo kaadi xooga. Kkkkkkkkkkkk
Marka Harti iyo Isaaq u kala baxno ayaan arkaynaa ninka tuuladiisa xoog lagu joogo.
Inta ka horeysa guul aadan lahayn ayaad sheeganaysaa.
Ma aduun wax kala qarsoon yihiin ayaan joognaa!!
Land of punt sxb waan ogahay in aad garowsateen inaydaan somaliland dagaal ku wajihi karin oo aad is ledihiin qabiil kumosanaaba waa intaasoo aad gulaysataane colja wadhaf malagu dayay Mar hadaan dalka puntland iyo dowlada puntland aan fashiliyay oo aan qabiil kuceliyay walee guulaystay 19 Sano maxaad dadka cashuurta ugaqadayseen hadaydaan puntland ahaan kudifaaci karin kkkkkkk
Land of punt sxb salaada ciida laaskii malagutukanayaa kkkkkkkkkkkkkkk
Ma waxaad leedahay hadii la iga gacan sareeyo meesha ma joogi karee markhaati ka ahaada.
Anigu fuley baan kuu arkaa aan adkaysan karin hadii laga gacan sareeyo.
Dagaalka baho xabasho yaa laga wareysanayaa haad cararto.
Waxaan u arkaa @lop baa kaa geesisan saa isaga labada marba waa laha yaa.
Kalahage sxb tukoraq hadii puntland dagaal kulawareegto balankaygu waa inaan lakaftamin meshana aanaan madaxa qaadin yaa ilagalikara balankaa oo daarood kasojeeda anigu nin ishuba oo intuu boqolaal kilomitir kasoo dhaqaaqay garoowe duleed keeda kujalabutay Naya ayaan ahay car yaa kudhaca balankaa ladoosi maayo nin Daarooda
Waar hawiyoow markhaati ka ahaada
2 maamul ee meesha ku dagalamaayo mid walbo wuxuu taagan yahay itoobiya may nagu soo baxdo dagaalku ha joogsadee.
Mr gaas dantii uu lahaa waa gaaryay waayoo xooga waaka aruursayay qurbo joogta wuxuuna ku darsanayaa 2 sano oo dheraad ah madaama uu ku jiro abaabul dagaal.
Mr biixi dantii uu lahaa waa gaaray waayoo wuxuu rabay dagaalka ceel afweyn In uu weji kale u leexiyo.
Laakiin dhibka iyo fashilku wuxuu ka taagan yahay. Itoobiya waxaa qabsaday dadkii gobta ahaa oo aminsanaa somalida in iyaga laysu daayo. Lana qadiriyo dowlad somaliyeed.
Ar tigreegii no doona Hanna kala celiyee ayey sheekadu taagan tahay.
Talo wexey u talaa. Dowladda uu hogaamiyo Raisulwasaare xasan cali kheyre. Weliba waxaa igu maqaal ah in ay 2 maamul diyaar u yihiin in ay dhegeystaan.
Mr kheyre iska ilaali yaan midna kugu harawsan waxaa difacayaa midnimo.
Hoosta ka daawada odayaasha Gudabiirsi oo si caraga leh uga hadlay baroordiiqa Puntland. Hadaladooda waxaa ka mida;
“ jooji hayaay yaa daaroodaay, hadii kale Dir iyo Irir baa soo toosi. Puntland-na waxaa kula tali ama calan daarood qaata ama mid Soomaaliya”kkk
Walaahay saan u qoslaayaay indhuu i casaadeen.😀
Garqaad sxb farmaajo iyo khayre waxay xukumaan duqa magaalada muqdisho yariiysow Cid kale oo dhagaysataa majirto
Qolada idoor waxaan ku mataalayaa wiilkii aabihiii qowsaarka u ahaa ninka boqorkaa oo maalinkii dambe aabihiii dhintay isagoo u haysta in geela aabihii leeyahay oo maalinkii dambe boqorkii iyo ciidan fardooley ah ay u yimaadeen inay geelii soo kaxaystaan oo wiilkii uu isa soo mutaxay.
Ma geelan baad adigu leedahay uu boqorkii ku yiri geela aabahay baa iiga dhintee.
Boqorkii wiilkii yaraa indhaha ku gubay isagoo ka xanaaqsan wiilkaa leh geela aabahay baa iiga dhintay .Boqorkii ayaa wiilkii ku yiri adeer aabe shaqaale ayuu ii ahaa ee geela isagu malahayne ee geela iiga hor bayr.
Wiilkii af labadii ayuu yeeray geela aabhay baa lahaa ma i xoogaysaa qayladiisa markii laga joogi waayey wiilkii la dhangadeeyey isagoo meeshii booyahayana meeshii looga tagey geeliina sidaa lagu kaxeey.
Idoor haatan Laaska iyo Tukaraq waxay ku leeyihiin ingiriis baa nooga tagey sidii wiilkii qowsaarku dhalay. Ma oga dhulka ragii lahaa inuu usoo jeestey kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Xaange hadaanaan ku odhan xuduudkii ingiriska ayaanu tagaynaa mawaxaad nagarabtay sidiina inaanu nidhaa tolaay yadaaroodeey kkkkkkkkk kkkkkkkkk
BAL halaga badalo maalinta dagaalka ciidda.
Ciida Ka bacdi waa in laga Dhigaa dagaalka
Hadii kale Needham ceebaa Ka soon socota
Horta nimankan darood ee meeshan ka kaftamaya waa Niman ma qajilayaala oo aan xishoon sababtoo ah anigu makaftameen iyadoo burco daayoo cerigaabo darood xukumo walaahi inaanan rag lakaftameen bal anoo garoowe duleedkeeda ku qayilaya ayay ila hadlayaan cajab
BaHaL sxb waan kusalamay yaa ciyaala dir dir
Walaahi waa iga dhab waxaad noqoteen wiilkii qowsaarku geela uga dhintay.
Maalin dhawayd waxaan youtube ku arkay tu yaroo idoora oo leh Laacaanood angaa Dhulbahante kusoo dhawayney oo barakacayaal bay ahaayeen https://www.youtube.com/watch?v=WrpPVOBAWtE
Xaange sxb inaad ila kaftanto kuma banaana waa hadii aad dhiig ledahay dowlad baad shegatay waxba waad kuguri wayday tolaay yaa daroodeey ayaa tidhi waxba kuguri wayday markaa waa inaad igaxishootaa sxb
Anigu waxaan ahay ninka garoowe duleed keeda fadhiya ee tolaay yadaaroodeey kaaga siiyay
Waad ogtahay xiniinyo aad leedahay inaadan ku iman Tukaraq iyo Laascaanood toona rag baa ku keenay meesha.
Mar Xaabsade idin soo hor kaco iyo mashruuc idoor u xaglinaya ay kolba shaar soo xidhaan SSC Xagala toosiye To Khaatumo Cali been carare intaana waxa loo samaynayey waxay ahayd in Dhulbahante Puntland lagu diro taa oo shacabka intiisa badan ay ku guulaysteen inay ka dhaadhiciyaan in Puntland cadow ku tahay ee aanay Somaliland cadow ku ahayn.
Laakiin beentii Cali baa qarxiyey oo isagoon waxba gacanta ku hayn iska xaadiriyey Hargeysa oo la arkay isagoo halkaa ka baryootamaya maalin walba heshiiskii war heshiiskii ku haya taa oo keentay xitaa kuwii markii hore kula socdey cali in ay caadhuuftoodii dib u liqeen ayna ogaadeen inay ceeb iyo calool xumo reer tolkood usoo jiideen. Haatan walaahi raga la celin la’ yahay waa ragii cali ku axdi furay isagana dee idoor baa ku axdi furay. Haatana Dhulbahante 90% waa midaysan yahay waxaa la iska rabaa cidii idinku hayn lahayd deegaanadaa
Botoriskii iyo bararakhdii waa dhamaatay taa maanta iga qor
Oo adiga kuwa kulasocdaa maxay ku ukeeni waayeen walee reerku wixii lagu shegayay ayaa banaanka usobaxa halamash